people Nepal » राशिफल : कार्तिक ६ गते / अक्टोबर २३ तारिख सोमबार राशिफल : कार्तिक ६ गते / अक्टोबर २३ तारिख सोमबार – people Nepal
राशिफल : कार्तिक ६ गते / अक्टोबर २३ तारिख सोमबार
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल कार्तिक ६ गते सोमबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर २३ तारीख कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी चन्द्रमा बृश्चिक राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु
मेष राशि : चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । स्वास्थ क्षेत्रको खराबीले कार्य सम्पादनमा ब्यवधान उत्पन्न हुनेछ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ
जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । साजेदारी कार्यको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला ।
मीथुन राशि: का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
बोल्दा सजग रहनु होला बोलीको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला ।स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । यात्राकारक दिन रहनेछ ।
चांडो क्रोधको सिकार भईनेछ सजग रहनु होला । पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि क्षेत्र मध्यम रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ ।
पारिवारिक मेल मिलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक समय ब्यतित हुनेछ । सभा सम्मेलनमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । आटँ शाहसको कमीका कारण सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । दिन मध्यम रहनेछ
मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन् । सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेको छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ ।
निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आंट र साहसको कमि आउनेछ । साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
कार्य परीरिवतनको सम्भाबना रहेको छ । मित्र तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा खटपट रहन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । शारीरिक आलस्यताले सताउ सक्नेछ । मान्यजनको स्वास्थमा आएको खराबिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेको छ । परोपकारका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
आयमूलक कार्यमा जुट्ने माध्यम फेला पर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । बिद्या प्राप्तीको योग रहेको छ ।
नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।